DOWNLOAD Easyjet ရေယာဉ်စု v1.0 FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 188 ကို MB
downloads ရယူရန္ 107 441
Multiples Auhtors - အထုပ်ထဲမှာကြည့်ရှုပါ
Rikoooo (ပျံသန်းမှု Simulator X ကိုအဘို့အပြည့်စုံစင်းကို Easyjet ဗားရှင်း 1.0 တင်ဆက်FSX) SP2 သို့မဟုတ် Acceleration နှင့် Prepar3D (P3D+ Windows XP / Vista /7/ 8 နှင့်အတူ) သဟဇာတ
ဒီအထုပ်ကွဲပြားခြားနားသောစာရေးဆရာများ၏သက်သေပြချက်များတွင်အများအပြားမော်ဒယ်များနှင့် repaints ၏ရေးစပ်သည်, စာရေးဆရာများ၏စာရင်း Installer ကိုမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအရည်အသွေးအအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲပေးသူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အဟောင်းကိုဘိုးအင်း 737-300 ၏ထိန်းချုပ်မှုကို ယူ. (အဘယ်သူမျှမ VC ကို) ငါး repaints + အပြည့်အဝ 2D Panel ကိုအတူထည့်သွင်း
အဆိုပါဘိုးအင်း 737-700 (VC ကိုနှင့်အတူ) + Alrot + Wiper အားဖြင့်အဆင့်မြင့်လေယာဉ်မှူးအခန်း
(VC ကိုနှင့်အတူ) အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A319-111 အထူးစီးရီးအေအပါအဝင်သုံး repaints ပါဝင်သည် "ယူနီဆက်" + အထူး Pack ကို + A319 V3 + အပြာ, LED လေယာဉ်အင်ဂျင်များနှင့်အလင်းအိမ်ပယ်စတင်သည်, လက်စွဲဖတ်ရန်
(VC ကိုနှင့်အတူ) အဆိုပါအဲယားဘတ်စ် A320-200 သုံး repaints နှင့်အတူ + အထူး Pack ကို + A200 V320 + အပြာ LED အ 3th အထူးထုတ်ဝေလိမ္မော်ရောင်နှင့်အတူထည့်သွင်း လေယာဉ်အင်ဂျင်များနှင့်အလင်းအိမ်ပယ်စတင်သည်, လက်စွဲဖတ်ရန်
နှစ်ယောက် repaints အတူ Easyjet ဘတ်စ်ကားကပင်ပျံသန်းနိုင်သည်!
အဲယားဘတ်စ်ထုတ်ဝေအထူး V3 A319 / A320 ဒီ pack ကိုမှအဆင်ပြေအောင်ဘို့FrançoisDoréရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤသည်အဲယားဘတ်စ်အလွန်လက်တွေ့ကျစေသည်။
အားလုံးလေယာဉ်မကြာသေးမီကစင်းကိုမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကြကြောင်းလက်ရှိခွဲဘိုးအင်းမှ Easyjet, အသုံးပြုသောသူတို့အားကိုက်ညီတဲ့။ ထိုအင်ဂျင်များ၏အသံများကိုဂရုတစိုက်စစ်မှန်တဲ့မော်ဒယ်ကိုက်ညီဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျ။ မတော်တဆထိခိုက်မှုလျှင်ခရီးသည်တွေထံမှအသံသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပါဝင်သည်။
EasyJet လေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီလီမိတက် (easyJet အဖြစ် style အမျိုးမျိုး; LSE: EZJ) လန်ဒန် Luton လေဆိပ်တွင်ရုံးချုပ်ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 600 နိုင်ငံများတွင် 32 ကျော်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ scheduled န်ဆောင်မှု operating, သယ်ဆောင်ခရီးသည်အရေအတွက်အားဖြင့်တိုင်းတာယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏အကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိဘကုမ္ပဏီ, EasyJet plc, လန်ဒန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်စာရင်းနှင့် 100 မတ်လ 18 ၏အဖြစ် FTSE 2013 အညွှန်းကိန်းတစ်ခုမဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်ပါတယ်။7မတ်လ 2013 ၏အဖြစ်ကြောင့်ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် "8,000 လူမျိုးကိုစိုး" လုပ်ကိုင်။
EasyJet တန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းခရီးသွားဘို့စားသုံးသူဝယ်လိုအားကမီးလောင်ရာယ်ယူမှုနှင့်အခြေစိုက်စခန်းဖွင့်တဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်စိုက်ပျိုးပြီးလျှင်, 1995 အတွက်၎င်း၏တည်ထောင်ကတည်းကလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါလေကြောင်းလိုင်း, လက်အောက်ခံလေကြောင်းလိုင်း EasyJet ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အတူယခု 200 လေယာဉ်ပျံ, အများအားဖြင့်အဲယားဘတ်စ် A319 ကျော်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ဒါဟာဥရောပ, အကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်း Gatwick ဖြတ်ပြီး 23 အခြေစိုက်စခန်းရှိပါတယ်။ 2012 ခုနှစ်, EasyJet သန်း 50 ကျော်ခရီးသည်များသယ်ဆောင်နှင့် Ryanair နောက်ကွယ်မှဥရောပအတွက်ဒုတိယအကြီးဆုံးတန်ဖိုးနည်းလေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
EasyJet လန်ဒန် Luton မှာနောက်ပိုင်းတွင်အခြားအခြေစိုက်စခန်းများမှာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နောက်တော်သို့လိုက်ရာ ITV အပေါ်ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးလေကြောင်းလိုင်းထုတ်လွှင့်အတွက် featured ခဲ့သည်။
FrançoisDoréအားဖြင့်အဲယားဘတ်စ် A319 / A320 စီးရီးအေအထူး V3: 3.05 ဇှနျလ 24 မှ Panel ကိုဗားရှင်း 2012
အင်္ဂလိပ်ကို manual အဲယားဘတ်စ် A319 V3 ကိုကြည့်ပါ: https://www.rikoooo.com/images/public/rikoooo-62/EasyJet_Fleet_FSX__P3D/User_manual_PA_319_FD_Special_Version_V3.pdf
အင်္ဂလိပ်ကို manual အဲယားဘတ်စ် A320 V3 ကိုကြည့်ပါ: https://www.rikoooo.com/images/public/rikoooo-62/EasyJet_Fleet_FSX__P3D/User_manual_PA_A320_FD_Special_Version_V3.pdf
LED အဲယားဘတ်စ် A319 & A320 လေယာဉ်မှူးအခန်းအပြာ
Author: Multiples Auhtors - အထုပ်ထဲမှာကြည့်ရှုပါ